Okthobha 2017 -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2017 / EyeDwarha
Inyanga: October 2017
ezaposwa ngomhla Oktobha 31, 2017 Oktobha 31, 2017
Yazi i I-RT4 Ubume bobugcisa kwiNethiwekhi-IiRadiyo.
Funda iinkcukacha ezipheleleyo
ezaposwa ngomhla Oktobha 30, 2017 Oktobha 30, 2017
Uphononongo lweVidiyo yeRadio-Tone RT4
Bukela olu phononongo lwevidiyo yeNethiwekhi Android Radio RT4.
ezaposwa ngomhla Oktobha 29, 2017 Oktobha 29, 2017
Ngaba unayo imiqobo ye-eriyali?
Ke, ungumthandi werediyo engahlawulwayo. Uvele wangena kwigumbi elitsha waza wafikelela kwisigqibo sokuba abamelwane bakho abayi kukuvumela ukuba ufake i-eriyali eluphahleni.
Ewe kulungile. Usenemincili ngeli khaya litsha, ke ugqiba kwelokuba unamathele nje kwi-FM yakho endala. Uya kufestile kwaye uqalise ukuzama ukubetha bonke abaphindayo kuloo ndawo. Awubethi nenye. Sele uphelelwe lithemba, uncamathisela ingalo yakho ngaphandle kwefestile, usete i-HT kumandla apheleleyo, kwaye akukho nto. Awunakuva ukuhanjiswa.
Musa ukuhambisa. Awukho wedwa. Oku kwenzeke kwezinye ii-hams ezininzi kwihlabathi liphela. Ukuba uyayithanda i-hamradio ye-essence yokuba ne-QSO kunye nezinye ii-hams kwaye uxoxe ngetekhnoloji, usengayisebenzisa I-IRN-Inethiwekhi yeRadiyo yeHlabathi.
Le nkqubo iqhagamshelwe kwiindlela ezininzi ze-hamradio RF kwihlabathi liphela kwaye unokuhlala unxibelelana noluntu. Konke okudingayo kukudityaniswa kwe-WiFi, okanye isicwangciso sedatha se-3G / 4G kwaye uqhagamshelwe. Qaphela ukuba ufuna ilayisensi yehamradio esebenzayo ukuba ufuna ukuhambisa i-IRN.
Iyonwabisa. Kuseyiradio! (ngaphandle kokuba ucinga ukuba i-hamradio yi-CW kuphela-sukuvumela abanye bakuxelele ukuba yintoni kwaye ayisiyi-hamradio. Cinga ngokwakho. Yonwabela umdlalo owuthandayo! Asisekho kwiminyaka yama-60)
IHamradio yile nto ufuna ukuba yiyo!
ezaposwa ngomhla Oktobha 28, 2017 Novemba 12, 2017
Phumelela i-Inrico T298s yasimahla 3G / Wifi + UHF Radio (400-470 MHz)
Eli lithuba lakho elihle lokuphumelela i-transceiver yenethiwekhi yasimahla ye-UHF-oyena mthengisi ubalaseleyo I-Inrico T298s 3G / Wifi + UHF Radio (400-470 MHz)
Akukho mfuneko yokuba uthenge nantoni na. Konke okufuneka ukwenze ukubhalisa kwincwadana yethu ngefowuni yakho kwaye ufumana ukungena simahla kwi-sweepstake eyakwenzeka nge-31/12/2017.
Siza kuqhagamshelana ophumeleleyo nge-imeyile ke qiniseka ukuba uyongeza idilesi yemeyile kubafowunelwa bakho ukuze ingagqibi kwifolda yogaxekile. Idilesi yethu ye-imeyile yile hamradio@megahertz.shop
Nje ukuba ubhalise ufumana ikhowudi yakho eyahlukileyo kwaye kufuneka wabelane nabahlobo bakho. Jonga ukuba ungawanyusa njani amathuba akho:
Undwendwe ngalunye oluthunyelwe 1 ukungena
Yabelana ngokungena kwi-LinkedIn +1
Yabelana ngePinterest +1 ukungena
ezaposwa ngomhla Oktobha 26, 2017 Oktobha 26, 2017
Yongeza ukulandelela i-GPS kwiNethiwekhi yakho yeNethiwekhi usebenzisa iRadioTone RT4
I-Radio-Tone RT4 iza nesisombululo esigxunyekwe kwisoftware esivumela ukujonga ukuba bakho phi abantu osebenza nabo, izihlobo okanye ezinye iiHams.
Nokuba uyisebenzisela ukusebenza neeapps ezinje ngeZello, okanye ihabradio hobby ene-IRN, iRadioTone yeyona radio iphambili kunene ephathwayo. Inika imeko eyomeleleyo nembonakalo yeMotorola yangoku. Ibhetri yayo ihlala ngonaphakade kwaye isithethi sihambisa isandi esimangalisayo kunye nesikristale esicacileyo.
I-Smartphone ye-RT4 PTT yimveliso engenaphepha-mvume kwaye ayinasithintelo kumgama ngokungafaniyo noonomathotholo bendabuko. Ilungele i-3G, i-4G kunye neNethiwekhi yeWifi, ngokuchaneka okuphezulu kwe-GPS ye-Antenna eneSoftware yokuBekwa kwi-Intanethi ifakiwe. Indawo ekhawulezileyo inokulandelelwa ngamaqonga ahlukeneyo (i-PC kunye nee-smartphones). Abanini banokulandela uMlando weNdawo kunye neSantya sazo naziphi iifowuni; kuyakubakho ialam kunye nezaziso zayo nayiphi na ifowuni ukuba ngaphandle kwe-geofence, ebekwe ngumnini-nethiwekhi.
Ulwazi lokuthenga lunokufumaneka apha
ezaposwa ngomhla Oktobha 26, 2017
Sonke siyakuthanda ukuthetha ne-hamradio comunity, akunjalo? Ungathini xa unokuqhubeka nokunxibelelana nezinye iihams, xa uhamba nesiphatho sakho ngaphandle kokufikelela kumphindeli wasekhaya?
Khawufane ucinge ilizwe elinqamlezayo, uhambo olude ngololiwe luzele zii-QSO ezintle neziphumayo.
Ngenye imini, iRedBull Air Race yeza eOporto, ePortugal. Njengokuba ndihlala eLisbon, ndaye ndagqiba kwelokuba ndikhwele iikhilomitha ezingama-300 ngololiwe ukuya kubukela ugqatso. Ndithathe eyam unomathotholo ophathwayo nam. Ijongeka ngathi yinto yokuhambisa ngesandla ngesandla eqhelekileyo. Kodwa ayisiyiyo. Yiselfowni enamaqhosha e-PTT. Iqela leSpeak 3 lifakelwe kwaye lilungiswe kwi I-IRN-Inethiwekhi yeRadiyo yeHlabathi, Ndandixhumene neqela lam endilithandayo le-hamradio Talk: Isitishi seGuild QSO. Ndiyakuxelela… Olunjani uhambo olumnandi. Ewe, kufuneka ndivume, ndiyaluthanda uhambo oluhle lokuhamba ngololiwe. Ndahlala nje, ndakhululeka kwaye ndonwabela izimvo ngefestile yam, ngelixa ndithetha nabahlobo bam. Ngethamsanqa, lo loliwe wanikezela ngonxibelelwano lwasimahla lweWi-Fi, kodwa ndinokusebenzisa i-3G dataplan yam.
Ndiyazi ukuba ikude le Conventionl hamradio, kodwa izinto ziyavela. Ukuba le asiyiyo idradio yakho, kuba usebenzisa uthungelwano lwentengiso kwezothutho ngelizwi, ndiyakuhlonipha, kodwa… Indlela endibona ngayo? I-hamradio OM, kuloliwe ohlaziyayo, kunye nerediyo entle efana nesandla, uthetha nezinye iihams, kwelinye icala lolwandle. Kum, ayisiyonto ngaphandle koku ”i-hamradioing".
Konwabele ukukhwela kwakho!
ezaposwa ngomhla Oktobha 16, 2017 Oktobha 16, 2017
Uyenza njani isebenze i-AT & T 4G / LTE kwiRfinder radios
Kukho inkqubo ekhethekileyo yokwenza inkonzo ye-4G LTE isebenze kwi-RFinder yakho nge-AT & T Wireless:
Thumela i-imeyile kuyo jr5788@att.com kunye W2CYK@rfinder.net kwiCC.
ISIHLOKO: M1 Guqula i-LTE
«YOSH, NCEDA UTSHINTSHE UM1 WAM UKUBA LTE.
IMEI YAM I:
INOMBOLO YAM YOMNXEBA:
IPINI YAM YOKUHLAZIYA KUNYE NOKUYA:
ENKOSI NGENKXASO YAKHO!
IGAMA LAKHO NENOMBOLO YAKHO YOQHAGAMSHELWANO »
Emva koko, kufuneka ulinde ukuya kwiintsuku ezimbalwa kude kusebenze ukusebenza. Yonwabela amandla akho eRFinder LTE.
Inkqubo enjalo ayimfuneko kwamanye amazwe.
ezaposwa ngomhla Oktobha 16, 2017 Matshi 18, 2019
I-IRN-Inethiwekhi yeRadiyo yeHlabathi
IRN (Inethiwekhi yerediyo yamanye amazweInkqubo yeVoIP / RoIP isebenzisa iTeamspeak 3 (TS3) evumela abasebenzisi bomsakazo ukuba basenze i-TX / RX iNg RF kwihlabathi jikelele zisebenzisa izixhobo ezahlukeneyo (iifowuni eziphathwayo, iitafile, iikhompyuter njl.njl) simahla.
Inkqubo ivumela abasebenzisi ukuba benze amaqela abucala okuthetha ngokwalatha okanye amaqela abucala eQSO's.
Ukuba ungathanda ukongeza ikhonkco lakho, umphindayo okanye ihabhu kwinkqubo ye-IRN, nceda sebenzisa icandelo lokunxibelelana nathi ukusishiya ngomgca.
I-TS3 iyafumaneka kwiApple, Android, PC, Mac nakwiLinux. I-IRN ine-server yayo yabucala evumela amakhulu kunxibelelwano ngaxeshanye. Kukho amaqela okuthetha ahlukeneyo (amajelo) ngaphakathi avumela abasebenzisi amandla apheleleyo eRX / TX kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zerediyo kunye neenkqubo ezivela kwihlabathi liphela.
Ukwenza umdla ngakumbi, ungasebenzisa ii-smartphones ze-PTT ezinikwe amandla njengezi zidweliswe ngezantsi. Uninzi lwee-hams zisebenzisa iifowuni ezinikwe amandla yi-PTT, ukuze zisebenzise i-IRN ngohlobo olufanayo njengoko zisebenzisa unomathotholo ophathwayo. Amaqela eentetho ze-IRN anokufikelelwa nge-GPRS / 3G / 4G / Wifi okanye i-RF (kuxhomekeke kubaphindayo).
Nceda uqaphele: Le nkqubo isimahla ukuba isetyenziselwe zombini ukungabinaphepha-mvume * kunye neehams ezinelayisensi. Ukuphindaphinda i-ham-radio ephindaphindayo kunokufikelelwa kuphela ziilayisensi ezinemvume.
* Abasebenzisi abangenaphepha-mvume kufuneka benze isicelo sobulungu be-IRN ukuze babenomnxeba owenziweyo (Ungakhathazeki, isimahla).
Ezi zixhobo zilandelayo zineqhosha le-PTT elizinikeleyo eliya kwenza amava akho abe ngcono ngakumbi xa usebenzisa i-IRN.
Bukela ividiyo yedemo
Phila i-QSO usebenzisa i-IRN ngeRadio yeFowuni- Inrico TM-7
ezaposwa ngomhla Oktobha 15, 2017 Oktobha 27, 2017
Zello eJamani - uluntu olukhulu
KwiKhanal Zello Funk siluluntu olukhulu kunomathotholo.
Apha, abaqhubi berediyo abayithandayo, ababekade besebenza kunye nabadlala ngonomathotholo, abaphathi, amakhosikazi asekhaya, abaqhubi beeteksi nabaqhubi beelori, ukhuseleko kunye nabafundi badibana. Wonke umntu angazibandakanya kwaye wamkelekile kulo msele.
Uhlelo lokusebenza lwasimahla lwe-zello lusebenza kuyo nayiphi na i-PC, i-Android, iBlackBerry okanye i-IOS.
UZello uguqula iselfowuni ibe yi-walkie-talkie. Oko kukuthi, imiyalezo yezwi iveliswa ngokuthe ngqo ngexesha lokwenyani kumaqabane omnxeba. Into ekufuneka uyenzile kukucofa iqhosha lokuthetha kwaye uya kuviwa ngabahlobo.
KwaZellofunk, sithetha ngezinto zemihla ngemihla kwaye sonwabile nomnye nomnye. Siyadlala, sihleka kwaye sonwabela ithuba lokufikelela kubahlobo bakanomathotholo be-zello kwihlabathi liphela. Sithetha nangemiba enzulu kwaye ngaphezulu kwayo yonke into siyancedana xa kufanelekile.
NguNicu osuka zello.info
I-Radio Tone RT4 - 4G i-WiFi iZello Transceiver
Ngokuqinisekileyo F25 - 4G Wifi Zello Transceiver
ezaposwa ngomhla Oktobha 15, 2017 Oktobha 15, 2017
UZello xa eqhuba
Zello radio emotweni
Ukulungiselela ukusetyenziswa kweseli ngexesha lokuqhuba kunye nokwenza ikhuseleke, iqhosha leBluetooth PTT linokusetyenziswa xa usebenzisa iselfowuni.
Kumzekelo obonisiweyo, i-Samsung Galaxy S7 yayisetyenziswa nge "Auto Bluetooth Media Button" esuka kwiXCSource.
Zombini izixhobo zinokudityaniswa ngokulula kwaye zisebenze ngokugqibeleleyo.
Iqhosha lokudlala / lokuphumla lichazwe njengeqhosha lokuthumela kwaye lisebenza (kuxhomekeke kuseto) kwi-PTT nakwimo yokutshintsha.
Kwakhona, amaqhosha evolumu ayasebenza kwaye avumela uhlengahlengiso lwevolumu yeselfowuni.
Izinto ezibandakanyiweyo zivumela ukunamathela ngokuthe ngqo (ngesiqeshana) kwivili lokuqhuba. Isandla akufuneki sishiye ivili lokuqhuba ngelixa ucofa iqhosha le-PTT.
Ngenye indlela, iMediabutton inokuncanyathiselwa kwindawo efanelekileyo (kusetyenziswa iteyiphu yokuncamathela ebonelelweyo).
Emva kovavanyo lokuqala, indibaniselwano yefowuni ephathekayo neMediabutton kunye nokudityaniswa kwiziko leendaba lemoto (ukwandisa ivolumu yokwamkela) sisisombululo esisebenzayo sokusebenza kweselfowuni!
Umbhali: Nicu ovela http://zello.info